Amathiphu Okugcina Ompompi Basegumbini Lakho Lokugeza Bengena Spot Futhi Bengavuzi - Ompompi Basekhishini Abangcono Kakhulu 2021 | Ompompi Basegumbini Lokugezela Abangcono Kakhulu | I-WOWOW Faucets
Ikhaya / Blog / Amathiphu Wokugcina Oompompi Bakho Bokugeza Bengenabala futhi Bungavuza
2021 / 09 / 25 UkwahlukanisaBlog 4234 0
Ipayipi yokugezela esanda kuhlanzwa, engenabala ingenza konke okudingayo ukuze ubonge umhlobiso wakho wokugezela. Kodwa-ke, kubalulekile ukuthi uqaphele ukuthi ompompi bendawo yokugezela ngeke bahlale behlanzekile isikhathi eside ngaphandle kokuthi banakekelwe ngokufanele njalo. Inkinga enkulu yokugcina ompompi bendawo yokugezela, kufaka phakathi ompompi bamanzi okugeza, ompompi bendawo yokugezela, ompompi bendawo yokugezela nezinye izesekeli zangasese, ukuthi bathambekele ekuqongeleleni amabala amanzi kalula. Lokhu kungakha isithombe esibi ekubukekeni kukonke kwendlu yakho yokugezela.
Uma ufuna ukufeza ukubukeka okungenachashaza kwendlu yakho yokugezela, nanka amanye amathiphu ochwepheshe wokugcina ompompi bakho bokugezela kalula. Sicela ufunde uqhubeke.
- Ukuqonda isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu kuyaphela: Izitayela zokuhlobisa izindlu zangasese zishintshe kakhulu ngokuhamba kwesikhathi. Sezadlula izinsuku lapho abantu babethanda ukufaka ompompi bensimbi noma osinki kuphela, ompompi bendawo yokugezela nezinye izinto zokugezela ezindlini zabo zokugezela. Ngokuvuselelwa kokuhlobisa kwendlu yangasese, ompompi bendawo yokugezela bayatholakala ezinkulungwaneni eziningi zezinketho zokuqeda. Kusuka ethusi, ithusi, ingilazi, insimbi, kanye nezinketho eziningi ezijabulisayo, izidingo zokugcinwa kompompi zizoncika kakhulu ekugcineni kompompi wokugezela. Ngakho-ke, kufanele uyihlaziye ukuze wazi okuhlanzela okungcono kakhulu kokuhlanzwa.
- Zama inhlanganisela yensipho eyomile namanzi afudumele. Uma amabala anenkani noma izindawo zamanzi zinqwabelene ompompi bakho bokugezela, ungazama ukuzihlanza ngosizo lwensipho eyomile namanzi afudumele. Hlanganisa okufanayo bese usebenzisa indwangu yokuhlanza ethambile ukususa lawo mabala anenkani namabala. Udinga nje ukusula iyunithi lesinki ngesihlanza bese uyomisa ngendwangu engasetshenziswanga ukuyinika ukubukeka okucwebezelayo.
- Sebenzisa uviniga omhlophe ukususa ukungcola: Uma umpompi wakho wokucwila wakha ukungcola ongeke ukwazi ukukukhipha, lapho-ke ungacabanga ukusebenzisa uviniga omhlophe ukuwususa. Zama ukufaka uhhafu wenkomishi kaviniga omhlophe kwenye inkomishi yamanzi ashisayo engxenye. Ngemuva kwalokho ungagcoba indwangu yokuhlanza kuyo ukuze ususe ukungcola okunenkani okuqoqene kumbhobho wakho wokugezela. Kunconywa ukuthi uzame ingxenye encane yendawo yokugezela ngalesi sixazululo ukuqinisekisa ukuthi awulimazi ubuso besakhiwo.
- Isixazululo sokugcina sesoda nesixubho. Isoda yokubhaka iyimpuphu emangalisayo enezicelo kuzo zonke izingxenye zempilo. Lesi sithako sasekhishini singakusiza futhi ukuthi ususe amabala anenkani nokukhubazeka ezintweni zakho zokugezela. Konke okudingeka ukwenze ukugcoba ingxenye yesoda yokubhaka endaweni ethintekile ngebhrashi lamazinyo eliswakanyisiwe. Lokhu kuzosebenza njengesikhuhli semvelo futhi kuzosusa wonke amabala amabi ompompi bakho bokugezela.
- Hlanza njalo. Uma ungafuni ukujuluka usuku ukuze ususe amabala ezindaweni zakho zangasese, ungazongela isikhathi namandla ngokwenza ukuhlanza okuvamile kokufakwa kwakho endlini yangasese njalo. . Ungahlela usuku olulodwa evikini ukuze uhlanze kahle zonke izinto zakho zangasese.
Amathiphu Wokugcina Indlu Yakho Yangasese Ivuza
Ubani othanda indlu yokugezela egcwele amanzi lapho kuconsa khona amanzi kuwo wonke umpompi wasendlini yokugezela, kufaka phakathi ompompi bendawo yokugezela, amasinki nezinye izesekeli zangasese? Ngenxa yesimo samanzi ukungena ngaphakathi kwezikhala ezincane kakhulu, kubalulekile ukugcina indlu yakho yokugezela ingavuleki ngaphansi kwazo zonke izimo. Ngaphezu kwalokho, ngaphezu kokuvimbela amanzi ekuqoqeni endlini yakho yokugezela, kufanele futhi ugcine amanzi ngazo zonke izindleko. Ngakho-ke, uma ungumuntu ophapheme, lapho-ke ungathatha lezi zinyathelo zokulungisa indlu yangasese, kufaka phakathi ompompi bendawo yangasese, ongavuzi
- Faka amathayela we-porcelain. Amathayili obumba abonakalise ukuthi alungile kakhulu ezindongeni naseminyango njengoba engathinteki ukuvuza okujwayelekile. Lokhu kungenxa yesilinganiso esiphakeme kakhulu se-porcelain material. Ikhono lamathayili we-porcelain lokumunca amanzi lisebenza kakhulu kangangokuba la mathayili nawo athole indlela yawo ekwakhiweni kwendlu yangasese ekwakhiweni kwezakhiwo zangasese zanamuhla. Ngaphandle kwezici ezinhle ezinikezwa yilezi tile, amathayili we-porcelain nawo abukeka ekhanga ngenxa yendawo yawo ecwebezelayo nokuqedwa kwe-matte okubenza bamelane namanzi. Zibuye ziqine kakhulu, zibenze bakhethe kahle ompompi bendawo yokugezela.
- Ungavumeli noma yiziphi izikhala ekuxhumaneni kwamapayipi. Izindawo eziningi zokugezela zenzelwe ngamapayipi afihliwe e-PVC. Lokhu kuxhumana kwamapayipi kuthanda ukuvuza. Ngakho-ke, la malungu kufanele avalwe ngosizo lwetheyiphu engangeni manzi. Kufanele uqiniseke ukuthi azikho izikhala emajoyintini amapayipi. Ngaphezu kwalokho, amapayipi akufanele abe nokugoba, ngaphandle kwalokho, angahle athambekele ekuvuzeni.
- Nikeza ithambeka elincane phansi. Lena inqubo enhle yokugcina indlu yakho yokugezela ingavuzi futhi nokuvikela noma yimuphi umonakalo wamanzi. Lapho udizayina isikhala sakho sokugezela, kufanele ucele amalungu eqembu afanelekile ukuthi anikeze ithambeka elincane esphini ukuze amanzi ageleze ngokwemvelo aye kulelo hlangothi. Ithambeka elifanele lendawo yokugezela imvamisa liphakathi kwamasentimitha ama-intshi no-1/8 intshi ngonyawo. Ngaphezu kwalokhu, ungahle uthande ukucabanga ngokuba nezindawo eziningi zokuhambisa amanzi kuyo yonke indawo yokugezela ukuze amanzi angavaleli noma abhukule.
- I-tile evikelekile ene-adhesive engenamanzi. Ezikhathini zakamuva nje, indlela yendabuko yokuvikela amathayili endlu yokugezela nompompi bendawo yokugezela ngosimende nesihlabathi ithathelwe indawo ukusetshenziswa kokunamathela okufanele. Izinto zokunamathisela ezitholakalayo ziyimpushana eyomile eyenziwe ngosimende exutshwe namanzi ukuze kwenziwe uthayela olunamathelayo olujiyile. Lapho isetshenziselwa amathayili okugeza kanye nompompi bokugezela, zingenziwa ukuthi zibambisane ngokuqinile isikhathi eside. Izimpawu zokuqina nokuvimbela amanzi okunamathela zivimbela noma yikuphi ukuvuza kwamanzi okungenzeka.
- Khetha okufaka amanzi. Indlu yokugezela yindawo yendlu evezwe umswakama omkhulu nomswakama. Ngakho-ke, ungakhetha upende ongangeni manzi noma ongacwebezeli ozohlala ungashintshi isikhathi eside ngisho nangemva kokumanzi okuqhubekayo. Le mibala nayo ivimbela noma yikuphi ukucwiliswa emanzini ngakho-ke ayimanzisi izindonga zangasese.
Ufuna ukugcina indlu yakho yokugezela ingavuleki? Ungafunda ngamathiphu asebenzayo ahlobene nezinsiza zokugezela ezifana nompompi bendawo yokugezela ukuqinisekisa ukuthi lokhu kuyenziwa.
Edlule :: Yenza Ikhishi Lakho Lihlakaniphe Ngompompi Bekhishi Olandelayo: Ukuthola I-Plumber Namathiphu We-Plumbing Ukunciphisa Ukusetshenziswa Kwamanzi
2021 / 09 / 28 2293
2021 / 09 / 27 2234